PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-01-28 - Ukuwa kwendlu wukuvuka kwenye
Ukuwa kwendlu wukuvuka kwenye
Ilanga langeSonto - 2018-01-28 - Ezemidlalo -
UDUNGUNYANE olusibekele iplatinum Stars kubukeka lungase lugcine lube yisibusiso esikhulu kubathandi bakanobhutshuzwayo bakwazulu-natal abajwayele ukuminca uma sekuzosongwa isizini amakilabhu alapha evika izembe.
Le kilabhu yasenorth West ihaqwe yizinkinga selokhu kuqale ukuvela kwemibiko yokuthi isendalini.
Kumanje ithishwa ngabaningi ukuthi yiyona ezogencwa yizembe ngokuphela kwesizini.
Ibambe ibhuleki kwi- log ye-absa Premiership.
Kubukeka emancane amathuba okuthi le kilabhu ecijwa nguroger de Sa iphunyule kulo mlomo we- ngwenya elengela kuwona.
Ukuqala kwemikhankaso yezikhulu zasenorth West yokuba ingahanjelwa imidlalo yale kilabhu yasekhaya, kubukeka kuzoyicindezela nakakhulu.
Le mikhankaso igovuzwa nguThabo Mogatle obezimisele ngokuthenga le kilabhu kusuka ngowezi-2015. Nokho kubikwa ukuthi usephose ithawula.
Njengoba kucaca ukuthi ngeke sisheshe ukwelapheka isifo seplatinum, kubukeka ikwazulu-natal isethubeni lokuba nesizini enhle njengoba amakilabhu amathathu ayimele engekho esimweni esibi kakhulu.
Imaritzburg United isefomini enhle futhi ibukeka izoqeda kalula kwi- top 4, kanti nelamontville Golden Arrows isengasonga kwitop 8.
Amazulu FC alwela ukugcina ilungelo lawo kulesi sigaba kwazise yisizini yawo yokuqala ebuyele kusona.
Isimo sawo kasisihle nokho siyethembisa. Kuzokhumbuleka ukuthi usuthu luthenge ilungelo leThanda Royal Zulu ngokuqala kwale sizini.
Amakilabhu akulesi sifundazwe angase elanywe yireal Kings egila izimanga kwinational First Division (NFD) ngaphansi kukasimo Dladla ongumqeqeshi.
Ikings ibukeka ihamba ezinyathelweni zechippa United kasiviwe “Chippa” Mpengesi engatha- ndanga ukwakha inxuluma kwiSecond Division nakwinfd.
Nakuba ichippa United ifike yadunguzela kwi-absa Premiership ngesikhathi umpengesi epheka ethulula abaqeqeshi kodwa ukukhula kwakhe ekuphathweni kukanobhutshuzwayo sekuyilethele uzinzo kulesi sigaba.
Ngikholwa wukuthi sesifkile isikhathi sokuba ubongani Ngidi ophethe ikings aqale ukuzizungeza ngabantu abanolwazi olunzulu lwalo mdlalo futhi abanothando lwekilabhu yakhe, hhayi nje abajahe ukumsenga.
Kungaba yinto enhle kakhulu ukuba ikwazulu-natal imelwe ngamakilabhu amane esigabeni esikhulu ngesizini ezayo.
Igauteng sekunesikhathi eside idlela phezu kwamakhanda azo zonke izifundazwe zakuleli ngokuba namakilabhu amaningi kwiAbsa Premiership njengoba kuyimanje imelwe yimamelodi Sundowns, isupersport United, ikaizer Chiefs, i-orlando Pirates nebidvest Wits.
Izolo ebusuku bewuyindumezulu umdlalo wechiefs nedowns ngenxa yengcwenga yala makilabhu muva nje. Ngiyethemba ukuthi ngolunye usuku nemidlalo yawakwazulu-natal iyokuba yindaba egudwini, ihehe izinkulungwane. Nokho konke kulele ekukhulumiseni ibhola enkundleni, abalandeli bangaphathwa wubuthongo.